Kygo E7 / 1000 the Kygo TWS maka ụdị ndị ọrụ niile [Nyochaa] | Akụkọ akụrụngwa
Miguel Hernandez | | Ihe nkiri na usoro, General, Nyocha
Oge ụfọdụ gara aga, anyị nyochara ihe mbụ anyị hụrụ na ụlọ ọrụ ahụ Ndụ Kygo, Akara nke DJ na onye na-ese ihe Kygo nke hapụrụ anyị anya nke ukwuu site n'ịdị mma na ntụgharị nke ihe ọ na-enye, anyị na-akwado ka ị gafee nyocha nke Kygo A11 / 800.
Agbanyeghị, oge a ka anyị lekwasịrị anya na ngwaahịa dị iche, Kygo E7 / 1000, ekweisi TWS na igbe igbe ya, chọpụta nyocha anyị. N'ime ya, dị ka mgbe niile, ị ga-ahụ n'ụzọ miri emi etu ngwaahịa a si arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ọ bara uru n'ezie, ị ga-atụ uche ya?
Dị ka oge niile, ọ ga-amasị m ịga obere njegharị nke ụlọ ọrụ ahụ, ọkachasị mgbe anyị na-emeso ụdị ndị amachaghị nke ọma. Na-emegharị onwe anyị n'elu Kygo Life bụ akara nke onye na-ese ihe na DJ Kygo, ụlọ ọrụ ahụ siri ike na Norway ma nwee ọtụtụ ngwaahịa na katalọgụ ya, ha niile lekwasịrị anya na ọdịyo, ngalaba nke nna nna ya bụ Kygo na-achịkwa.
1 Nzube na ihe: Ihe di iche na ahia ahia
3 Nnwere onwe na ntọala
4 Ahụmahụ onye ọrụ na ogo ọdịyo
Nzube na ihe: Ihe di iche na ahia ahia
Ihe mbu nke juru m anya banyere Kygo E7 / 1000 a bu na ha choro imewe nke na adighi ka ndi ozo. Omume a na-eme na TWS bụ ile anya dị ka o kwere mee Apple's AirPods ma na igbe ahụ ma na ngwaahịa ahụ n'onwe ya, agbanyeghị, Kygo Life ahọrọla ọdịiche doro anya na ekweisi na igbe nkwụ ụgwọ ya, ma nwee oke zuru oke na nke ahụ achọpụta ozugbo. Anyị nwere ntị ntị anyị nwere na ntị nke anyị nwere ike iji ya na ọtụtụ ngwa dịka clamps ma ọ bụ kwekọrọ pad dabere na mkpa anyị. Site na oge mbụ anyị na-ahụ na ndị a Kygo E7 / 1000 dịkarịa ala dị iche iche, nke ahụ ga-enwekwa obi ekele n'ahịa jupụtara na ihe ndị yiri ya.
3 ụzọ nkwụnye ntị: S, M, L
1 ụzọ nkwụnye ụfụfụ
3 ụzọ nkekọchi ntị: S, M, L.
1 ụzọ nke silicone hoops
Ya lightness bụ ihe ijuanya, igbe nkwụnye ihe na earbuds n'ime na-anọ ihe dịka gram 60. Igbe ahụ dịkwa oke kọmpat, Ọ dị ka obi zuru oke (kama ịbụ cylindrical). Nke bụ eziokwu bụ na ọ pere mpe karịa mgbe ọ na-abịa iburu ya n'akpa gị, ebe ọ nwere ike ịba ụba. N'ezie, nhazi ya na-enye ya ohere ịhapụ ya n'akụkụ ọ bụla n'atụghị ụjọ. Cheta na Enwere ike ịzụta ha na ọcha na oji. Ha anọwo dị nnọọ mma na-eme mgbatị, Ọ bụrụ na ịhọrọ nke ọma, clamps ahụ na-ejide ya n'ụzọ zuru oke.
Anyị na-amalite na ekweisi, ha nwere Ọkwọ ụgbọala 6mm maka onye ọ bụla ha na-enye impudence nke 1-6 ± 15% na a nzaghachi ugboro ole nke dị n'etiti 20Hz na 20kHz, nke bụ nnọọ nkịtị na ụdị ngwaahịa. Banyere uche, anyị ruru 116 db. Maka ihe niile a ọ na-eji Bluetooth 5.0 na ihe omume di gburugburu 10m nke kariri zutere anyi. Oge a anyi enweghi aptX na họrọ maka ụkpụrụ AAC, nkịtị karịsịa na ngwaọrụ iOS.
Ekweisi nke ọ bụla nwere igwe okwu nke ha ha na-akpọ oku stereo (anyị nwere ike ịza oku na-eyi naanị otu ekweisi, ha nọọrọ onwe ha) na nkagbu mkpọtụ maka ha. Isi ekwe ekwe bụ akpaka na-apụ na igbe ma ha gbanyụọ mgbe a na-eweghachi ha, agbanyeghị, anyị na-atụ uche usoro nchọpụta nke na-akwụsị egwu ahụ mgbe anyị wepụrụ ha na ntị anyị.Mmakọ ọnụ na-akpaghị aka na ngwa ngwa, ọ bụ ezie na m ga-achọ ịkọ na ha adabaghị na ngwa Kygo, ihe tụrụ m n'anya nyere ezigbo ahụmịhe ọ na-enye.
Nnwere onwe na ntọala
Anyị enweghị data akọwapụtara na mAh nke batrị ahụ, ihe anyị nwere bụ ihe dị ka awa ise nke egwu playback na nnukwu mpịakọta na ekweisi maka ngụkọta nke 24 awa ọ bụrụ na anyị nwere ebubo eboro site na igbe. Ndị a bụ data ị nyere anyị na nyocha anyị gbasara otu ọnwa. A na-akwụ ụgwọ nke igbe ahụ site na iji eriri USB-C (gụnyere na igbe ahụ) na nke a yiri ka ọ bụ mgbakwunye, ọ dị mma ma ịkụ nzọ na ọkọlọtọ amaala taa.
Ọ dị mma ịkọ na ekweisi nwere bọtịnụ anụ ahụ na nke ọ bụla n'ime ha na-eme onwe ha. Site na ekweisi ndị a, anyị ga-enwe ike ibuli ma belata olu ya bụ isi, agbanyeghị na anyị nwekwara ike ịgafe egwu ahụ, kpọọ onye enyemaka ngwa ngwa nke ngwaọrụ anyị (Google Assistant or Siri) ma zaa oku site na obere ma ọ bụ ogologo oge. Ọ dị m ka ọ dị ịtụnanya na ha na-ahọrọ sistemụ bọtịnụ, mana na-atụle na ekele maka njigide ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ha agaghị ada, ọ nwere ike ịbụ ihe ezi uche dị na ya iji zere mmetụ na-enweghị uche.
Ahụmahụ onye ọrụ na ogo ọdịyo
Ha bụ ekweisi ekwekọrịtara maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ niile, anyị nwere IPX7 ọsụsọ na mmiri na-eguzogide ya mere a na-egosi ha maka egwuregwu, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị kpebie ịkụ nzọ na clamps kama mgbanaka silicone. Ha nwere oke dị elu ma na-enye ụda dị elu, dịka ọ na-eme na ngwaahịa ndị ọzọ nke ika ahụ, ụda dị elu ma dị ike karịa nkezi nke ngwaahịa nke klaasị a. N'aka nke ọzọ, achọrọ m ịkọwa na oku ekwentị enweela ihe ịga nke ọma, a na-ahụkarị igwe okwu stereo na ịkpọ ha na ha bụ ihe obi ụtọ.
M na-atụ uche na ha opted maka usoro nke bọtịnụ anụ ahụ na ntị ntị ọ bụla yana enweghị ihe mmetụta nke na-akwụsị egwu mgbe ị na-ewepụ ha, ọ bụ ngwaahịa dị elu nke a ga-atụ anya ihe dị ka nke a. Otu ihe m nwere olile anya bụ na ha dakọtara na ngwa Kygo, ma ha adabaghị.
Ha na-eji anụ ahụ multimedia bọtịnụ
Ha enweghị nso ihe mmetụta
Ha adabaghị na ngwa Kygo
Site na nkwekọrịta, anyị nwere ekweisi na-eguzogide ọgwụ, wuru nke ọma, na Bluetooth 5.0 ma n'ezie ha na-ada ụda nke ukwuu, na-ada ụda ma doo anya iji nwee ọ enjoyụ na egwu, ma wepụta ya site n'èzí iji lekwasị anya na-enweghị ANC.
Ọdịdị dị elu na ike, dị ka ngwaahịa ndị ọzọ Kygo
Ike na ihe dị mma, yana igbe kọmpat
Igwe okwu dị mma maka oku
Nkasi obi na ohere nke iso ha gwuo egwuregwu
Anyị na-eche ngwaahịa nke 149,99 euro na ị pụrụ ịzụta ma na ya ukara website na A Amazon njikọ. Ha nwere ike bụrụ ihe na-atọ ụtọ iji nye ekeresimesi a.
Kygo E7 / 1000 the Kygo TWS maka ụdị ndị ọrụ niile
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Kygo E7 / 1000 Kygo's TWS maka ụdị ndị ọrụ niile [Nyochaa]
Edere m onwe m, naanị m na-ege ntị n'otu n'otu ka m nwere ike ime iji gee ntị na ha abụọ. Enyemaka.
Zaghachi adrian guillermo sosa guevara
Hohem iSteady Mobile + Gimbal Nyochaa